Home Wararka DEG DEG;Madaxweynaha Eritrea Oo Goodrhow gaaray Magaalada Addis Ababa+Sawiro
DEG DEG;Madaxweynaha Eritrea Oo Goodrhow gaaray Magaalada Addis Ababa+Sawiro
Madaxweynaha Eritrea Isias Afewerki ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya markii ugu horraysay muddo ka badan 20 sano. Booqshadiisa ayaa jawaab u ah tii uu todobaadkii hore Eritrea ku tegey ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed.
Socdaalkiisa ayaa la filayaa inuu qayb ka qaato isku soo dhoweynta xiriirka labada dal oo labaatankii sano ee la soo dhaafay aad u liitay.
Xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada dal ayaa go’naa tan iyo wakhtigaas, waxaana sidoo kale kala irdhoobay qoysas wada dhashay ama xidid ahaa.
Xurguftii labada dal dhex martay ayaa noqotay mid gobolka ku fidday.
Tan iyo markii uu dhowr bilood xukunka qabtay ra’iisul wasaare Abiy Axmed, Itoobiya waxaa ka socday isbeddello siyaasadeed iyo kuwo milateri, wuxuuna sidoo kale isku dayayey inuu dib u hagaajiyo xiriirka uu dalkiisu la leeyahay waddamada gobolka.
Eritrea iyo Itoobiya waxaa u dhexeeyay colaad dhanka xadka ah tan iyo sannadkii 2000 markaasi oo la gaaray heshiis nabadeed oo lagu joojinayo dagaalka oo tobbonaan kun oo qof lagu dilay.
Guddiga kormeerka deegannada xadka ah ee lagu muransan yahay ayaa la sameeyay, ka dibna waxaa laga la gaaray heshiis magaalada Badme lagu siiyay Eritrea, halka Itoobiya ay diiday inay aqbasho in magaaladaasi lagu wareejiyo Eritrea.
Wixii intaasi ka dambeeyay xaaladda xadka labada dal way kacsanayd.
Colaadda labada dal waxay saamayn ku yeelatay gobolka, waxay la kala safteen dhinacyada ku dagaallamayey Soomaaliya. Eritrea waxaa lagu eedeynayay inay taageerto kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama Soomaaliya halka Itoobiya ay taageerto dowladda Soomaaliya.
Ilaa xilligii uu Abiy Axmed ra’iisul wasaare Itoobiya ka noqday wuxuu billaabay isbaddalo cusub.
Wuxuu kulan magaalada Asmara kula qaatay madaxweynaha Eritrea, halkaaso ay heshiisyo dhowr ah ku kala saxiixdeen.
Labada hoggaamiye waxay sheegeen inay ka shaqaynayaan sare u qaadidda arrimaha dhaqaalaha labada dal iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed.
Waxaa markii ugu horreysay la isugu furay khadadka telefoonada labada dal tan iyo sannadkii 1998-kii. Dadweyanaha labada dal ayaa soo dhaweeyay tallaabada isgaarsiinta labada la isku furay, waxayna durbadiiba billaabeen inay wacaan eheladooda kala jooga labada dal.
Previous articleSomaliland oo taageero buuxda ka heshay shirka ka dhici doono Brussels
Next articleDEG DEG:Qarax Xoogan oo Laga Maqlay Magaalada Muqdisho+Dagaal toos ah oo socdo
DEG DEG:Afayahenka Gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Xalane oo Xabsiga La Dhigay